खाना र पिउने, सलादहरू
एक नियमको रूपमा, सर्दियोंको मौसममा गर्म सलादहरू धेरै लोकप्रिय छन्, जब तपाईं सधैँ स्वादिष्ट, गहिरो र हार्दिक डिश संग लापरवाही गर्न चाहनुहुन्छ। तथापि, तिनीहरू गर्मीमा तिनीहरूलाई ध्यान दिन्छन्। उदाहरणका लागि, चिकन वा माछाको साथमा तातो सलाद डिनरको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ। हामी तपाईंलाई ध्यान दिनेछौं यस्तो व्यञ्जनको तयारीको लागि धेरै व्यञ्जनहरू।
कसरी गरम चिकन सलाद पकाउने?
यो नुस्खा धेरै घटक समावेश गर्दछ, तर यदि तिनीहरूमध्ये कुनै पनि अपील छैन भने, तपाइँ यसलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो स्वाद खराब हुन सम्भव छैन। त्यसैले, यो सलाद तयार गर्न तपाईले निम्न सामग्रीहरू भण्डारण गर्न आवश्यक छ: 200-250 ग्राम चिकन फलालेट, ताजा ककुल, तीन टमाटर, 60 ग्राम कडा पनीर, नींबूको रस दुई वटा चम्मच, धेरै जैतूनको तेल र महसुस, लेफ्टस, सिजन, नुन र खुबै बिरुवाहरू - तपाईंको स्वादमा।
पाक कला प्रक्रिया
चिकन फ्लेलेट राम्रो तरिकाले धोए र सानो सूखे, र त्यसपछि मध्यम टुक्राहरूमा काट्नुहोस्। सिमल, मरिच, मसाले मसाले जोड्नुहोस् र केहि मिनेटका लागि छोड्नुहोस्। त्यस पछि, चिकन फ्लेलेट को फ्रिल टुक्राहरु ग्रिल मा दुवै पक्षबाट।
हामी टमाटर साना साना स्लाइसमा काट्छौं, र ककुलहरू रिंग्स वा सेमेयरिंगमा काटेर। एक भात को एक पात राम्रो संग हात मा तोडिएको छ। हार्ड पनीर पतली प्लास्टिकमा काटिएको छ। डिशमा, सब्जियों, त्यसपछि फिलेट को फ्राइड टुक्राहरू र त्यसपछि पनीर को टुक्राहरु राख्छन्।
एक अलग कटोरा मा, नींबू को रस र जैतून को तेल संग शहद को मिश्रण। नमक र सिजनहरू थप्नुहोस्। राम्रो तरिकाले हलचल र यस मिश्रण मिश्रण को माथि सलाद संग। तपाईं पनि हाम्रो डिशले बीउ संग छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। स्वादिष्ट, सुशील र सुगंधित गर्म सलाद तयार छ! एउटा न्यानो फारममा तालिकामा सेवा गर्नुहोस्। Bon appetit!
हट कोड सलाद: खाना पकाने को लागि नुस्खा
हामी यस डिश को एक र रमाइलो संस्करण तपाईंको अदालत मा प्रस्तुत गर्दछौं। गर्म सलाद पकाउने न केवल मासुको आधार मा, तर पनि माछाबाट, उदाहरणका लागि तातो स्मोक्डको कोडबाट। यो डिश बाहिर मात्र स्वादिष्ट हुन्छ, तर संतोषजनक पनि, दैनिक रूपमा रोजगारी, र एक सेलिब्रिटी टेबलमा उपयुक्त हुनेछ। यसलाई पकाउनको लागी तपाईले निम्न खाद्य पदार्थहरूको भान्साको उपस्थितिको हेरचाह गर्नुपर्दछ: गरम भरीको पोड 400 ग्राम ग्राम, चार नमकीन कर्कर, धेरै लेट्सी पातहरू, एक गिलासका डिब्बा हरी मटर, पाँच मध्यम आकारको आलु, मेयनेजको 100-200 ग्राम, नमक र कालो मिर्च टाँस्नुहोस्।
हामी पकाएर आलुलाई पकाउँनेछौं, त्यसपछि ठुलो, पिक्सेल र सानो चौडाईमा काटेर। कर्कर पतली स्ट्रिप्समा काटियो। हामी हड्डीबाट माछा सफा गर्छौं र तिनीहरूलाई सानो टुक्रामा काट्छौं। लेटी को पट्टिहरू राम्ररी धोए र फ्लैट प्लेटमा राख्थे।
एक अलग कटोरा मा, हाम्रो डिश को सबै अवयवहरु लाई मिश्रण गर्नुहोस: आलु, डिब्बाबंद मटर, माछा को टुकडे र खीराहरु। मेयोनेज र मिश्रणको ग्लासको दुई-तेस्रो थप्नुहोस्। लेफ्टूस पातहरु संग प्लेट मा जन को फैलाउनुहोस्। हामी बाँकी बाँकी मेनु साथै, डिश सानो सानो टाढाको हरियो संग सजाय हुन सक्छ। हट सलाद, जुन हामीले भर्खरै नुहाउने, तयारी पछि तुरुन्तै सेवा गर्नुपर्छ। Bon appetit!
कसरी चिकन जिगर र मीठो चेरीबाट एकदम असल तातो सलाद बनाउनुहोस्
यस तथ्यको बावजुद यो डिशको अवयव चेरी हो, तपाई आफैं आफैलाई गर्मीमा मात्र खाना बनाउन सक्नुहुन्छ, तर सर्दमा पनि जमे भएका व्यक्तिहरु संग ताजा जामुन प्रतिस्थापन गर्दछ। त्यसैले, यो सलाद तयार गर्न, तपाईलाई निम्न उत्पादनहरू भण्डारण गर्न आवश्यक छ: कुखुराको 300 ग्राम (दिमागमा मिश्रित हुन सक्छ), केही लेट्सी पातहरू, आधा एक सेतो, बल्ब, सोया ससको चम्मच, 50 ग्राम मक्खन, सानो अँध्यारो। चटनीको लागि हामीले लाल वाल को 100 मिलीलीटर (अधिमानतः सुखा), नींबूको रस को एक चम्मच, स्टार्च को चम्मच, 10 ग्राम मक्खन, दुई चम्मचका दुई चक्कर, 20-30 बिरुवाको मीठा चेरी र नमक पिचको खाँचो पर्छ।
हामी चटको साथ सुरु गर्छौं। हामी मीठो चेरीका पातलो र सुकेको जामलाई ढुङ्गाबाट खाली गर्छौं, त्यसपछि तिनीहरूलाई सानो साउसेनमा पठाउनुहोस्, दाखरस थप गर्नुहोस् र फोडा ल्याउनुहोस्। त्यस पछि, बेरीहरू बाहिरिएका छन् ताकि तिनीहरू फोडा गर्दैनन्। रक्सीमा, चीनी, नमक, नींबूको रस, एक चम्मच पानी, स्टार्च र फोडामा तीन मिनेटको लागि पतला। फेरि, चेरीमा चेरी फर्काउनुहोस्, यो मास 1-2-2 मिनेटको लागि यो मल मिलाउनुहोस्। हाम्रो डिशको लागि स्वादिष्ट र धनात्मक चटनी तयार छ!
अब हामी सलाद को तैयारी मा बदलछन। लिवर धोएको छ र साना टुक्राहरूमा काटिएको छ। त्यसपछि तिनीहरूलाई आटामा डुबाइदिनुभयो र पहिलेको फ्राइङ प्यानमा राख्नुभयो। हामी प्याज पनि आधा रङमा काट्छौं। पकाएर उप-उत्पादन र प्याज फेरी। जब जिगर भूरीज हुन्छ, फिसिङ प्यानमा कटाई सेब, सोया सस र मक्खन जोड्नुहोस्। ढक्कन बन्द गर्नुहोस् र केहि मिनेट पकाउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई आगो हटाउनुहोस्।
एक प्लेट मा लेटू फैल को धोए, सूखे र हात पनी पत्तियां । शीर्षमा, तलामा लिई जोड्नुहोस्, सस डाल्नुहोस् र जामुन सजाउनुहोस्। चिकन जिगर र चेरीको साथ तातो सलाद तयार छ! हामी यसलाई न्यानो रूपमा तालिकामा सेवा गर्छौं र स्वाद र मामाको आनन्द लिन्छौं!
गरम सलादहरू केवल मासु वा माछाको आधारमा पकाउन सकिन्छ तर तर तरकारी र पनीरबाट पनि। हामी तपाईंको ध्यानमा मीठा मरिचबाट यो डिशको नुस्खा ल्याउँदछौं।
तयारीको लागि हामीलाई निम्नलिखित सामग्री चाहिन्छ: धेरै मीठो मिर्च, चेरी टमाटर, फटा पनीर वा पनीर, साथै मरिच, नुन र अन्य मसलाहरू तपाईंको स्वादमा।
काली मिर्च, सफा गरी र संकीर्ण स्ट्रिप्स संग काटिएको छ। चेरी टमाटरहरू र हल्लाहरूमा काटिए। 8-10 मिनेटको लागि पनीर, नुन, काली मिर्च, मसाले जोड्नुहोस्, लपेटो र पूर्वग्रेषित ओवनमा पठाउनुहोस्।
जबकि मिर्च र टमाटरहरू पकाएका हुन्छन्, पनीर क्यूबमा काट्छन्। बेक्ड सब्जियां एक कटोरा मा राखयो, पनीर जोडें, थोडा सोया सस छीलें र टेबल मा गरम को सेवा गर्नुहोस। द्रुत हात तयारमा स्वादिष्ट गर्म सलाद! Bon appetit!
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न सामग्रीहरूमा आधारित विभिन्न तरिकामा गर्म सलादहरू पकाउन सकिन्छ। हामी आशा गर्छौं कि यस प्रकारका व्यंजनहरूले तपाइँको दैनिक र उत्सव मेनुमा एक उपयुक्त स्थान लिनेछ र तपाईंको परिवार वा अतिथिहरू बेपत्ता भएनन्।
लसुनसँग बिट्रोट सलाद: विविधतामा सादगी
डिब्बाबंद अनानास संग सलाद
फर कोट अन्तर्गत हिरोइनको लागि क्लासिक नुस्खा
टमाटर संग सलाद
Canon फ्लैश 430 EX द्वितीय: एक अवलोकन, सुविधा र समीक्षा
रगत कम प्लेटलेट स्तर?
विषय मा एक निबंध "वसन्त आएको छ।" पाठ विकल्पहरू। शुरुआती लागि सुझाव
शहर Mogilev-Podolsky: विवरण, फोटो
कोर्सिका: भूगोल र सुविधाहरू